Maxaan ka filan karnaa Apple sanadka 2018 | Wararka IPhone
louis padilla | | Noticias, dhowr
Waxaan bilaabeynaa sanad cusub sidii caadada inoo ahayd waxaan dhigeynaa sharadkeena wixii aan ka filan karno shirkada ugu muhiimsan adduunka. Ka dib markii la xiray 2017 nalalka iyo hooska (mid kastaa wuu qaybiyaa iyaga), Apple waxay wajaheysaa 2018 taas oo ay tahay inay ku sii wado tusida suuqyada iyo gaalada inay u sii qalanto booska koowaad ee shirkadaha ugu muhiimsan adduunka, iyo wixii ka sarreeya, kuwa ugu saameynta badan.
Alaabooyinka la shaaciyey laakiin aan weli lagu soo bandhigin suuqa, ipad cusub, iphone cusub, cusbooneysiin dheer oo la sugayay ee kaladuwan ee kumbuyuutarrada Mac oo ay horyaallaan Mac Pro ... liiska howlaha sugaya ayaa aad u ballaaran, waxaana dooneynaa inaan soo koobno ​​waxa hubaal ah inaan arki doonno iyo waxa waxaan arki karnay sanadkaan maanta bilaabmaya.
1 Waxa aan arki doonno shaki la'aan: HomePod iyo AirPower
2 New iPad Pro oo aan lahayn loox
3 IPad ka raqiisan 2018
4 Saddex iphone cusub, laba cabbir shaashad cusub
5 Apple Watch cusub 2018
6 Cusboonaysiinta kombiyuutarada Mac
7 AirPods cusub
Waxa aan arki doonno shaki la'aan: HomePod iyo AirPower
Apple weli waxay leedahay ballamo dhowr ah oo lala sugayo isticmaaleyaasheeda, oo leh laba magac oo si fiican loo qeexay: HomePod iyo AirPower. Afhayeen ku hadla kaas oo tayada codku ka adkaan doono "sirdoonkeeda" iyo saldhigga ku-dallaca induction kaas oo u oggolaan doona dib-u-soo-buuxinta isla iPhone, Apple Watch iyo AirPods. Lagu dhawaaqay 2017, imaanshahooda 2018 waa hubaal.
U dabbaaldegga HomePod wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya uguna horreeya ee ku hadla, markii aan nidhaahno tan waxaan run ahaantii uga jeednaa waa in Apple aysan doonayn inay sameyso qalab qaab Amazon Echo ama Google Home ah. Apple waxay rabtaa qalab leh tayo codkiisu aad u sareeyo inay awood u leedahay inay go'aamiso xaaladaha qolka uu ku yaal iyo meesha uu ku dhex yaallo qolkaas si ay codka ula jaanqaadi karto xaaladahaas oo ay noo siin karto tayada ugu sarreysa ee suurtogalka ah. Tan awgeed, waxay leedahay 7 tweeter, mid walbana wuxuu leeyahay darawal u gaar ah, iyo woofer 4-inji ah oo kor u jeeda, marka lagu daro lix kuhadal oo qabsan doona codkeena dhib la'aan.
Sida iska cad af hayeenkani sidoo kale wuxuu yeelan doonaa Siri, kaaliyaha Apple-na waxaan ku siin karnaa tilmaamo cod ah oo lagu bilaabi karo muusikada ama loo diro fariimo qoraal ah, tusaale ahaan, laakiin ma lahaan doono howlo horumarsan sida kuwa ku hadla tartanka, taas oo aysan dad badani jeclayn. Waxaa lagu heli doonaa midab madow iyo caddaan ah, waxaana la soo saari lahaa jadwalka sanadka 2017, laakiin Apple daqiiqaddii ugu dambeysay ayaa dib u dhigtay illaa bilowgii sanadka 2018 taariikh sax ah ma leh. Qiimaheedu wuxuu noqonayaa $ 349 iyadoo aan la ogeyn qiimaha dalal kale oo ka baxsan Mareykanka.
Saldhigga AirPower ee Apple wuxuu noqonayaa badeecaddii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ka timaadda shirkadda, taasoo illaa hadda sii deysay kaliya saldhigyada danab ee iphone. Saldhiggan lacag-bixinta wireless-ka ah wuxuu la jaanqaadi doonaa heerka Qi, si la mid ah kuwii ugu dambeeyay ee shirkadda laga sii daayay, taasoo u muuqata inay ugu dambeyn go'aansatay inay la dhaqan gasho halbeeggan warshadaha. Waxay noqon doontaa mid la jaanqaadi doonta lacag la'aanta wireless-ka ee ku shaqeeya iPhone-ka iyo sida sawirku muujinayo waxay awood u yeelan doontaa inay saddex qalab isku mar ku shubto. Kaliya iPbone-kii ugu dambeeyay (8 iyo 8 Plus oo lagu daray X), Apple Watch Series 3 iyo AirPods oo leh sanduuqa cusub ee la jaan qaadaya. (weli lama hayo) dib ayaa looga soo buuxin karaa saldhiggan. Ma garanayno taariikhda saxda ah (horraantii 2018) ama qiimaha, in kasta oo xanta ay ka hadlayaan qadarka aan la tixgelin karin ee ah $ 199 ee Mareykanka.
New iPad Pro oo aan lahayn loox
Markaan ku dhammeyno alaabada aan ognahay inay imaan doonaan haa ama haa, waxaan ku bilaabaynaa xanta ku saabsan sii deynta cusub, iyo wararkaas dhexdooda ah iPad Pro waa halyeeyo waaweyn. Ka dib markii la bilaabay iPhone X oo leh shaashad ku dhow dhammaan qalabka hore, waxaa jira shaki yar in iPad Pro uu noqon doono kan ku xiga ee lagu darayo qaabkan cusub. Nidaamka aqoonsiga wajiga Apple (Face ID) ayaan ka maqnaan doonin ipadyadan cusub, waxaana xitaa lagu xantaa Apple Pencil cusub oo dib loo naqshadeeyay. oo laga yaabo inay la socdaan hawlo cusub. Waa iska cadahay inay ku darayaan processor-yada cusub ee A11 Bionic (laga yaabee inay yihiin A11X sida Apple ay badanaa ku sameyso kiniiniyadooda).
Waxa aan si dhab ah loo ogeyn waa waxa Apple ku sameyn doono cabirka shaashadaha, maadaama xanta ay is burinayaan. Qaarkood waxay yiraahdaan Apple waxay ku dhejin doontaa cabbirka 10,5-inch, taasoo ka dhigaysa iPad-ka yar mahadnaqa naqshaddan cusub ee bilaa qaab ah. Qaar kale waxay yiraahdaan dib u qaabeyntaani waxay sidoo kale gaari doontaa 12,9-inji. Waxa u muuqda inay cadahay ayaa ah in shirkadu sii wadi doonto inay ku sharraxdo tikniyoolajiyadda LCD ee shaashadahaas, Maadaama isbeddelka OLED uu caqabad weyn ku noqon doono heerka wax soo saarka iyo lacag dheeri ah oo Apple aysan dooneynin inay ku dalbato kiniiniyadeeda. Taariikhda xareynta Sharadku waxay ka hadlayaan xagaaga kadib.
IPad ka raqiisan 2018
Apple waxay naga yaabisay sanadkii hore markay soo saartay iPad 2017, kaniiniga ugu raqiisan ee shirkadu soo saartay ilaa heerkaas, dadaal cad oo ay dadka uga dhaadhicinayso inay cusboonaysiiyaan kaniinigooda ama ay doortaan halkii ay ka heli lahaayeen xulashooyin kale oo aad uga jaban suuqa. IPad-kan 2017 wuxuu ku soo daray processor-ka A9 kaas oo siiyay awood weyn, laakiin qaybta taban ee shaashadda ayuu ku lahaa, taas oo dib u dhac ku ahayd moodelladii hore, iyo sidoo kale qaabkeeda, sidoo kale dhumuc weyn. Waxaa laga yaabaa in dhibaatooyinkaas qaarkood lagu xallin karo jiilka dambe ee Apple ku dhawaaqi karo guga.
IPad-ka 2018-ka xitaa wuu garaaci karaa rikoorkii ka horreeyay ee qiimaha, isaga oo ka bilaabanaya $ 259., inkasta oo ay tani tahay xan aan inbadan la maqal oo ay umuuqato mid adag in la rumeeyo. Waxaa laga yaabaa inay tahay dadaalkii ugu dambeeyay ee Apple ay dib ugu soo celiso suuq hoos u dhac ku yimid meelo badan iyo beddelka kaliya ee lagula tartami karo tiro badan oo kiniin ah oo raqiis ah oo tartanku ku daadanayo khaanadaha dukaamada.
Saddex iphone cusub, laba cabbir shaashad cusub
Apple ayaa soo saartay iPhone X oo ay muddo sugayeen, iyagoo ka faa’iideysanaya sanadguuradii XNUMXaad tan iyo markii la soo saaray iPhone-kii ugu horreeyay. Bilooyin kadib markii la isla dhexmarayay bal in sawirka aaladda sawirka faraha lagu dhex dari doono shaashadda gadaasheeda, Apple waxay dooratay inay hubaal ku jabiso Aqoonsiga Taabashada oo ay bilawdo nidaam cusub oo lagu aqoonsado wajiga, Face ID. IPhone yar laakiin leh shaashad balaaran, batari cusub oo L ah iyo naqshad cusub oo kusoo laabanaysa birta iyo dhalada kadib sanado kadib iyadoo la adeegsanayo aluminium sida cunsurka ugu weyn ee alaabteeda ugu caansan. IPhone X-kan ayaa noqon doona midka calaamadeeya wadada uu taleefanka casriga ah ee shirkaddu qaadan doono sanadaha soo socda, isla markaana mala-awaal ku saabsan noocyada iPhone-ka ee aan arki doonno sannadkan ayaa durba qata shabakadda.
Waxaa la qiyaasayaa in Apple ay bilaabi karto seddex nooc oo cusub oo iPhone ah, oo leh laba cabbir shaashadeed oo cusub. IPhone XI oo leh cabir la mid ah kan hadda jira (5,8 inji), iPhone XI Plus oo leh 6,5 inji iyo cufnaan pixel ah oo gaari kara illaa 500 dpi iyo nooca OLED; iyo nooc kale oo ka raqiisan oo cabirkiisu yahay 6,1 inji iyo shaashadda LCD. Dhammaantood waxay lahaan doonaan naqshad la mid ah, iyadoon loox lahayn, waxayna la jaan qaadi karaan xukun wireless ah, marka lagu daro ku darista Aqoonsiga Face-ka. Soo-saareyaal awood badan, hagaajinta batteriga iyo xawaare dheereeya LTE ayaa ah qaar ka mid ah horumarinta oo ay ku jiri doonaan moodelladan cusub ee aan imaan doonin illaa dhammaadka sanadka.
Apple Watch cusub 2018
Saacadda Apple-ka ayaa had iyo jeer horseed u ah wararka xanta ah ee ku xeeran shirkadda, waxaana jiray hadal-hayn ku saabsan is-beddelka naqshadeynta dhowr sano hadda. Apple Watch wali isma beddelin qaabeynta tan iyo markii la soo saaray 2015, iyo 2018 waxaa laga yaabaa inay tahay sanadkii ay horeyba ugu jirtay isbeddel la taaban karo. Shaashadda 'microLED' ayaa awood u siin karta iyada oo noqota mid tamar badan oo khafiif ah, iyo cabirkiisu wuxuu ka dhigayaa mid kaamil ah inuu noqdo sariirta tijaabada ee Apple oo tikniyoolajiyaddan dambe u keento iPhone-ka. Xusuusnow in tani ay tahay wixii ku dhacay shaashadda OLED, oo soo saartay Apple Watch sanadkii 2015-kii oo gaadhay iPhone-ka 2017.
Markii aan ka hadlayno Apple Watch, waxaan inbadan ka hadlaynaa xiriirka ay la leedahay caafimaadka, iyo ku darida dareemayaasha cusub ee la xiriira. Apple Watch-ka cusub ayaa ku dari kara dareemayaal ay ku fuliyaan barnaamijyada koronto ku shaqeeya oo markaa awood u leh inay ka gudubto heerka garaaca wadnaha ee ay hadda kormeerto. Daawada wadnaha ee garaaca wadnaha si loo ogaado xaddiga oksijiinta ee dhiigga iyo dareemayaasha lagu cabbiro gulukoosta dhiigga sidoo kale waa la isla qaatay laakiin waxay umuuqataa mid aad u dhib badan inay yimaadaan mustaqbalka dhow, gaar ahaan ilbiriqsiyada. Apple Watch-kan cusub, oo ku imaan lahaa laba nooc (WiFi iyo LTE), lama soo bandhigi doono illaa Sebtember, oo ay weheliyaan iPhone-ka cusub.
Cusboonaysiinta kombiyuutarada Mac
Kumbuyuutarradu waxay kamid ahaayeen howlaha Apple ee sugaya muddo dheer. Qaar ka mid ah moodelladoodu waxay leeyihiin nashqado aan wax laga beddelin sannado, sida iMac, iyo kuwa kale waxay ku dhexjiraan meel udhaxeysa taas oo aan la aqoon halka ay aadi doonaan, sida MacBook Air. Waxa Apple ku sameyso kumbuyuutarradeeda waa wax aan la aqoon, oo badanaa waa wax meesha xanta badanaa aan sax ahayn.
IMac Pro-ka cusub ayaa hada la soo saaray inkasta oo naloo soo gudbiyey bishii Juun 2017, waxaana suuragal ah in sannadkan la cusbooneysiiyo. 21,5 iyo 27-inji iMac waa la cusbooneysiin doonaa, xitaa haddii kaliya lagu hagaajinayo gudaha, sidii dhacday sanad walba muddo dheer. Ma kala dooran kartaa inta udhaxeysa cawlkii caadiga ahaa ama cirroolkii Pro? Waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn, maadaama ay sidoo kale u muuqato mid aan macquul aheyn inay dib u habeyn weyn ku yeelan doonaan sanadkan.
MacBook wuxuu noqon karaa malaha noocii ugu horreeyay ee sanadkan la cusbooneysiiyo. Iyada oo laba jiil ay ka dambeeyaan, 2018 waxaad arki kartaa isku-darka qaar ka mid ah hagaajinta gudaha, laakiin lama filayo in isbeddel weyn uu ka dhici doono dibadda. Isla sidaas ayaa loo dhihi karaa MacBook Pro, oo cusbooneysiintiisa ay u badan tahay inay ku kooban tahay gudaha. Maxaa ku dhici doona Mac Mini iyo MacBook Air? Iyagu waa laba kambuyuutar oo dad badani dhahaan waa la halaabayaa, laakiin waxba kama ogin qorshaha dhabta ah ee Apple ay la leedahay.
Iyo Mac Pro? Apple ayaa sanadkii hore xaqiijisay inay ka shaqeyneyso Mac Pro cusub laakiin taasi lama bilaabi doono 2017, marka lagu daro shaashad cusub. Ma naqaano haddii Apple ay bilaabi doonto sanadkan, laakiin haddii ay sidaas tahay, waxay noqon laheyd wax caadi ah inay u dhacdo sidii iMac Pro, oo ka muuqata WWDC 2018 oo bilawday dhammaadka sanadka. Fursadaha balaarinta iibinta kadib iyo naqshad si buuxda loo cusbooneysiiyey marka la barbar dhigo tusaalaha hadda jira waa hubaal, laakiin wax yar ayaan ka ognahay kombiyuutarkan cusub.
Sameecadaha dhagaha ee Apple ayaa sii wadaya inay sababaan dareen waxayna ka mid yihiin wax soo saarka ugu guuleysta dadka isticmaala, iyadoo leh dib u eegis aad u wanaagsan. Ka dib in ka badan hal sano oo suuqa ku jira, waxay umuuqataa in la gaadhay waqtigii cusboonaysiinta ee dhaafsiisan lacag bixinta cusub ee lagu soo oogay xukun aan dhammaystirnayn oo Appel soo bandhigay bishii Sebtember 2017 oo aan wali suuqa soo gaadhin. Kuwani AirPods cusub waxay ku dari karaan horumarin dhinacyada ugu muranka badan, sida la'aanta kontaroolada taabashada mugga, marka lagu daro hagaajinta Bluetooth, sida ku darista tiknoolajiyada 5.0 ee iPhone-ka cusub horey u keenay, ama midabyo cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Maxaan ka filan karnaa Apple sanadka 2018
Tim Cook wuxuu sameeyay in ka badan 100 milyan oo dollar sannadkan